HBO dị ugbu a na Spain | Esi m mac
HBO dị ugbu a na Spain
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ otu n'ime akụkọ ndị ahụ n'izu ma yabụ na anyị enweghị ike ịkwụsị ikpuchi ya. HBO rutere Spain na ndepụta mara mma dị. Nke a bụ ezigbo ozi ọma maka ndị niile nwere mmasị ịnwe ọtụtụ nhọrọ ntụrụndụ dị maka oriri TV na ugbu a, na mgbakwunye na Netflix, nke anyị na Spain nọ kemgbe 2105 gara aga, HBO nọ n'ikpeazụ.
Ihe dị mma banyere HBO bụ na ọ na-eweta oge niile nke usoro nke afọ ndị na-adịbeghị anya, na-agbakwunye ndị niile Netflix na-efu na ndị ọzọ. Anyị nwekwara ike ịhụ usoro ndị a niile maka ọnụahịa nke euro 7,99 kwa ọnwa ma nwee obi ụtọ karịa usoro 3.000 nke usoro, ihe nkiri na ihe osise maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ebe ọ bụla.
N'oge a ọrụ a dị na-ekiri ebe ọ bụla, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla n'ihi na ọ nweghị nhọrọ ngosi na Smart TV na consoles n'oge ahụ. A na-atụ anya na ngwa ndị dakọtara ga-adị n'oge na-adịghị anya, mana ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ya na Apple TV, Chromecast, mbadamba, smartphones na sistemụ arụmọrụ iOS na gam akporo, Vodafone TV na kọmputa. Gụgharia ntụrụndụ bụ ihe na-emejuputa nke nta nke nta mgbe ọtụtụ afọ nke ịchọrọ na mba anyị na nke a dị mma maka mmadụ niile. Aha ndị dị ka Game of Thrones, Veep ma ọ bụ Westworld, dị na HBO, na mgbakwunye na Blindspot, The Big Band Theory, Flash, The Straing, Quantico, Ezi Detective, Silicon Valley ma ọ bụ The Paw Patrol, Peppa Pig, Caillou ma ọ bụ Dora na Explorer n'etiti ndị ọzọ…
Enwere ike ịchọta ozi niile ịchọrọ ma ọ bụ ịchọrọ ịma gbasara HBO n'onwe gị gọọmentị webụsaịtị nyeere ndị ọrụ na Spain. Ọzọkwa site n'ụzọ nke nkwalite Ha na-ahapụ anyị ka anyị nwaa ọnwa efu na-enweghị ọrụ. Ọ bụrụ n'ịrụ ọrụ ahụ ma emesịa, ịnwere ike isonye maka ọnụahịa guzobere nke euro 7,99 nke anyị hụgoro na mbido post a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » HBO dị ugbu a na Spain
Akwukwo - Onye na-agu akuko RSS, di na ego di egwu
Cyber ​​Monday na-enye gị ihe ị na-agaghị echefu